I-Bentley kunye ne-AutoDesk ziya kusebenzisana kunye ne-Geofumadas
I-Bentley ne-AutoDesk baya kusebenzisana
NgoJulayi, 2008 AutoCAD-AutoDesk, Microstation-Bentley
Kwinkomfa yenkomfa, aba bathengisi beefowuni ezimbini Baye imemezele isivumelwano sokwandisa ukusebenzisana phakathi kwezakhiwo, izakhiwo zobunjineli kunye neefowthifoli zokwakha ezibizwa ngokuba yi-AEC yesiNgesi. Sathetha ixesha elidlulileyo malunga izilinganiso phakathi kobugcisa bobabini; kwaye ngokwezinto ezilungileyo, i-AutoDesk kunye neBentley Baya kutshintshana zabo zincwadi, kuquka i-RealDWG ukuphumeza ukukwazi ukufunda nokubhala kwiimbalo zombini okanye i-dwg kungakhathaliseki ukuba yintoni iqonga apho basebenza khona.
Oku kubonakala kum enye yeendaba ezilungileyo kakhulu endandizivile, ingakumbi kuba kule ndawo naku-AutoCAD yakhe ye25 iminyaka kunye Microstation kunye 27 (ngaphandle 11 ngasentla) uya kuthathwa aphoswe emva kokuba ibekwe kakuhle kakhulu kwaye basinda kwedabi ixesha iiteknoloji elifutshane kakhulu. Ukuza kuthi ga ngoku, Microstation bakwazi ukufunda nokubhala natively on format DWG kunye AutoCAD yaye uyakwazi ukungenisa ifayile DGN, kodwa noko kujongwe kukuba omabini fomati babe ukwakhiwa Umgaqo hayi kuphela isicelo ezisisiseko kodwa AEC specializations ezahlukeneyo mhlawumbi ukwenza umlinganiselo ukuba ukuhlangabezana imigangatho OGC njenge ifomathi kulawulo kumda wesangqa.
Ukongeza, ezi nkampani zimbini liya kuququzelela inkqubo ibaleke phakathi kwezicelo zombini bokwakha, ubunjineli kunye nolwakhiwo njengoko ukuxhasa reciprocally zabo ujongano lwenkqubo (API). Ngesi lungiselelo, bobabini Bentley kunye AutoDesk kunike iprojekthi ukuba bathathe kumaqonga ezahlukeneyo, umzekelo, kungenzeka ukuba yakhiwe ngaphesheya 2d umaleko-moya e AutoCAD, kodwa nokugcina uphiliso 3D kwi Bentley Architecture.
Ukuzisebenzela kweesoftwe kuye esitsholo zabasebenzisi loyilo zobunjineli namaqonga kodwa ukuza kuthi ga ngoku siye sabona umgca geospatial ngakumbi. 2004 isifundo owenziwe yi-National Institute of Standards and Technology, US wafumanisa ukuba iindleko ngqo kutyalwa amaqonga kunye ngexesha ezingonelanga ukuzisebenzela kweesoftwe lumalunga $ 16 zezigidi ngonyaka ngamnye !!!
Injongo kukuba abasebenzisi bazinikezele emsebenzini, ukudala, ukubhema esikhundleni sokuba baqiniseke kwifomathi yeefayili okanye indlela abaza kubahambisa ngayo.
Khawube ukusebenza AutoDesk Revit, nokuba sibe oluncedisayo Bentley STAAD usebenza ngendlela enye, kunye ulawulo lwedatha NavisWorks kwaye athunyelwe web ngu ProjectWise ... wow !!!, le utshintsho ibali elifanayo.
Esi senzo kubonakala kakuhle kakhulu, ingakumbi AutoDesk, noxa isabelo esikhulu kwimarike, uyakuqonda ukuba abathengi abaninzi basebenzisa iingenelo zombini amaqonga kuba ekugqibeleni ke ukuba bazi ukuba njani ngcono ngayo.
Post edlulileyo«Edlulileyo Bhala uluhlu lweLincoln kwiiprojekthi zophando 2008 / 2010
Post Next Yiyiphi indlela ye-Real Estate Cadastre ehamba ngayoOkulandelayo "